Fanafody an-trano noho ny fivalanan'ny urin amin'ny alika | Tontolo alika
Fanafody an-trano ho an'ny aretin'ny urine amin'ny alika
Lourdes Sarmiento | | curiosities, aretina
Ny aretin'ny lalan-drà amin'ny alika dia iray amin'ireo toe-javatra mahazatra indrindra izay mety hijaly ny namantsika vokatry ny bakteria izay miafara amin'ny fampidirana azy ao amin'ny tatavia, ary mamindra azy io.
Na dia fahita matetika amin'ny vehivavy aza ny vehivavy, Tokony hitandrina ny soritr'aretina mety hitranga mba handraisana ireo fepetra ilaina. Ny iray amin'ireo fepetra ireo dia ny fanomezana azy ireo fanafody any an-trano momba ny aretin-kiso amin'ny alika.
1 Ahoana no ahafantarako raha voan'ny urine ny alikako?
1.1 Matetika kokoa ny mihetsika ny urin na mihetsika
1.2 Kavina kely raha oharina amin'ny fotoana hafa
1.3 Ho mavitrika kokoa noho ny tsy fahazoana aina sy ny fanaintainana
1.4 Rà mandriaka
1.5 Fofona maimbo
2 Ny antony mahatonga ny aretin-tratra amin'ny alika antitra
3 Afaka mahazo aretin-kiso ve ny alika kely?
4 Inona no hatao raha voan'ny urinary ny alikako?
4.1 Fanafody an-trano noho ny aretin'ny urine
4.1.1 Hatsarao ny alika amin'ny alikaola
4.1.2 Fahano blueberry ny alikao
4.1.3 Sakafo sy ranona misy vitamina C
4.1.4 Mampiasà vinaingitra paoma ho toy ny mpanadio "voajanahary"
4.1.5 Asio ranom-boasarimakirana ao anaty rano
Ahoana no ahafantarako raha voan'ny urine ny alikako?
Raha mandinika tsara ny biby fiompinao ianao, dia ho fantatrao ny habetsaky ny moka vokariny isaky ny manao ny asa aman-draharahany izy, indrindra fa ny ora tokony hanaovana azy. Mba hamaritana raha marary ny alika ny alika dia mila mandinika izao manaraka izao ianao:
Matetika kokoa ny mihetsika ny urin na mihetsika
Azo inoana fa hanamarika izany ianao manandrana mikoty izy fa amin'ny farany tsy afaka manao n'inona n'inona. Izy io dia zavatra mitovitovy amin'ny rehefa mandeha mitsika ianao fa maharitra fotoana lava vao tratrarina ary amin'ny farany dia tsy mahazo mandraraka na inona na inona. Toy izany koa no mitranga amin'ny alikanao, raha mahatsikaritra izany ianao dia io no famantarana voalohany amin'ny aretin'ny urinary.
Kavina kely raha oharina amin'ny fotoana hafa
Izy io dia mifamatotra akaiky amin'ny soritr'aretina teo aloha, satria ny alika dia sarotra ny mimi, ny azo antoka indrindra dia tena mahantra ny habetsaky ny urine. Ity dia iray amin'ireo soritr'aretina mety asehon'ny alikao.
Ho mavitrika kokoa noho ny tsy fahazoana aina sy ny fanaintainana
Izany no tianay holazaina amin'izany hihetsika tsy tapaka, mandeha amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa ary ambonin'izany rehetra izany, mankamin'ny toerana izay mazàna manamaivana ny tenany. Izany dia vokatry ny tsy fahazoana aina tsapanao rehefa tsy afaka mimi ianao na ny fanaintainana tsapanao rehefa manao izany.
Amin'izao fotoana izao nandroso be ny aretina ary miharihary kokoa noho ny fisian'ny ra ao amin'ny urine. Ny habetsany dia mety miova arakaraka ny tanjaky ny aretina, satria na dia alika sasany aza dia mandroaka ra betsaka kokoa, ny hafa kosa tsy dia be loatra, ka tonga hatramin'ny famadihana ny urine amin'ny loko mena maivana.
Io no rafitra miavaka indrindra amin'ny rehetra, satria ny alika dia voan'ny urinary, ny fofona ateraky ny minao dia mahery be ary tsy mahafinaritra. Azo inoana fa ho tsikaritrareo fa manana olana izy rehefa tsikaritrareo ny fofon'ny mony.
Ny antony mahatonga ny aretin-tratra amin'ny alika antitra
Ny aretin-kônina amin'ny alika dia mahazatra kokoa noho ny noeritreretinao, ary amin'ny vehivavy dia mahazatra kokoa izany raha olon-dehibe izy ireo. Ireo aretina ireo dia vokatry ny bakteria izay mahavita miditra amin'ny lalan-dra avy any ivelany, mahatratra ny tatavia, ary mety hahatratra ny voa mihitsy.
Anisan'ireo lafin-javatra afaka manome alika ny alika anao hidona amin'ny areti-mifindra, mety ho vokatry ny tsy fihinanan-tsakafo tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian'ny fahadiovana ao amin'ny toerana ivoahany, fivoaran'ny vato ary vay, ankoatry ny hafa. Fa toy izany, ny antony mahatonga ny UTI amin'ny alika dia noho ny:
Bakteria toy ny Escherichia Coli, izay apetraka ao amin'ny prostate an'ny alika (raha lahy izy io), ary mahavita miaina amin'ny faritra anal na manodidina ny taovam-pananahana aza.
Raha tsy miotrika amin'ny alàlan'ny fahita matetika ny alika dia hiafara amin'ny fahazoana io bakteria voalaza io, satria ny urine dia mitondra ny marary rehetra rehefa afaka miditra amin'ny urethra izy.
Raha ny an'ny alika vehivavy, satria tsy manana urethra lehibe kokoa noho ny lahy izy ireo, dia mazàna izy ireo no miangona kely, izay midika fa vintana lehibe kokoa tratran'ny aretina. Ny sakafo manome alalma ny urine dia mampitombo ny mety hisian'ny aretin'ny alika anao.
Ka ny sakafo no zava-dehibe indrindra raha ny amin'ny fisorohana ny fahasarotana amin'ity karazana ity.
Afaka mahazo aretin-kiso ve ny alika kely?
Tena sarotra ho an'ny alika kely ny manolotra areti-mifindra amin'ity karazana ity, satria raha ny teôlika dia omena tsindrona sy vaksiny hiarovana azy ireo izy ireo, noho izany dia tena tsy fahita firy izany.
Raha sendra zavatra toa izao, ny zavatra mahasalama sy mahiratra indrindra alohan'ny hampiharana fanafody ao an-trano dia ny fandraisanao azy haingana araka izay azo atao amin'ny mpitsabo, satria toe-javatra tsy mahazatra io ary raha tsy voatsabo ara-potoana izy io dia mety hiteraka fahasarotana lehibe amin'ny fianan'ny biby.
Etsy ankilany, azonao atao ny mamantatra raha voan'ny urine ny alikanao raha tsikaritrareo fa niova be ny fahazarana sy ny hetsika ataonaoManomboka mikiaka eraky ny toerana izy ireo na mahamarika azy ireo toy ny hoe reraka na kely angovo.
Mety noho ny aretina na aretina hafa. Fa ny tena zava-dehibe dia ny mahatsikaritra ny lokon'ny ranony ianao. Raha tsikaritrareo fa mavo be io (mihoatra ny mahazatra) dia mety ho mariky ny aretina izany.
Tsy maintsy manasongadina teboka tena lehibe iray izay tsy azonao odian-tsy hita: fitsaboana-tena ho an'ny alikanao. Tsy tokony hanome antibiotika mihitsy ianao alohan'ny hanatonana dokotera. Azonao atao ny manaratsy ny toe-javatra misy azy ary amin'ny tranga ratsy indrindra dia vonoy izy.
Inona no hatao raha voan'ny urinary ny alikako?
Raha miahiahy ianao fa voan'ny urine ny volonao, Ny zavatra voalohany hatolotray dia ny hitondranao azy any amin'ny mpitsabo biby hodinihinao, raha toa ka manana ianao kajikajy ireo dia hitaky fikolokoloana biby mba hahafahan'ny biby mandroaka azy ireo.
Raha mieritreritra ianao fa manana alika efa antitra fa tsy alika kely, raha manomboka mahatsikaritra ny sasany amin'ireo soritr'aretina notononinay tao amin'ny fizarana voalohany ianao dia azonao atao ny manakana ny aretina tsy hiharatsy ary hampiadana azy mandra-pahatonganao mividy ny ilaina fanafody.
Amin'izay mba, izay hatolotray dia manana fiasan-droa: misoroka ny fihemorana ary manampy ny fanarenana amin'ny aretina, ary anisan'ireny ny:
Fanafody an-trano noho ny aretin'ny urine
Hatsarao ny alika amin'ny alikaola
Raha jerentsika ny fomba fiasan'ny aretin'ny urine amin'ny alika, dia ho takatra fa ny zava-drehetra dia mitoetra ao anatin'ny fotoana ialan'ny alikanao. Satria io dia rafitra fototra iray izay manakana ny bakteria tsy hipetraka ao amin'ny urethra ary handalo ny tatavia na ny voa.
Raha misotro rano ampy ny alikanao dia ho afaka mimi imbetsaka araka izay ilaina izy mba ho salama. Tsara ihany koa ny manome hydration tsara kokoa ho an'ny bitika satria tsy matetika izy ireo no mioty matetika. Fomba iray azo ampiasaina hitazomana ny biby fiompinao hamelombelona ny fanomezana azy ireo broths an-trano, nefa tsy misy sira na sakafo mampiroborobo ny fitomboan'ny lanja.
Fahano blueberry ny alikao
Anisan'ireo voankazo na sakafo mahasoa ny rafitry ny alika ny blueberry. Mazava ho azy ny fihinanana azy dia ny fisorohana ny aretina fa tsy mihetsika, efa rehefa marary ny biby fiompinao.
Sakafo sy ranona misy vitamina C
Ny zava-dehibe tokony hataonao rehefa maneho ny soritr'aretin'ny aretina ny alikao dia ny manandrana mampitombo ny asidra ao amin'ny urine. Satria misy olana amin'ny fivalanana, ranom-boasary, ny fihinanana sakafo manankarena vitamina C dia hanampy ny biby handroaka ranon-javatra mora kokoa.
Araka ny azonao an-tsaina, ny voasary, tangerine, manga, manga ary loharano hafa manankarena vitamina C dia hahasoa ny alikao. Izany dia satria ny fisotrony dia hanana fananana asidra bebe kokoa, izay hamorona tontolo tsy mahafinaritra kokoa ho an'ireo bakteria mipetraka ao amin'ny urethra sy ny rafitry ny urin'ilay alika.
Mampiasà vinaingitra paoma ho toy ny mpanadio "voajanahary"
Tsy ny vinaingitra paoma ihany no manana fananana mahasoa ho an'ny olona rehefa manana olana amin'ny urin izy ireo, fa mankasitraka ny alika koa. Noho izany, ity fanafody an-trano tsotra ity dia afaka manampy be an'ireo fantson-drano miangona tsy be loatra ny sakana ary noho izany dia sorohy ny fanangonana bakteria.
Asio ranom-boasarimakirana ao anaty rano
Tahaka ny voasary, tangerine ary sakafo hafa manankarena vitamina C, ny voasarimakirana dia fanafody an-trano matanjaka amin'ny aretin'ny urine amin'ny alika. Noho ny asidra, na amin'ny teny hafa, ny fahaizany mampitombo ny haavon'ny pH ao anaty rà, dia hahatonga ny bibinao tsy hahatsapa fanaintainana sy may kokoa rehefa mihi.
Ataovy ao an-tsaina fa ny fanafody an-trano irery dia tsy mahasitrana ny tsimok'aretina fa manatsara ny fizotran'ny fanasitranana fotsiny ary mahatonga azy ireo ho zakaina kokoa manoloana ny olana toy izany. Ny tianay holazaina dia izany mila manatona mpitsabo biby ianao ary mifanaraka amin'ny fitsaboana atoro azy.
Fa mandritra izany fotoana izany dia azonao atao ny mampihatra ny sasany amin'ireo fitsaboana ao an-trano. Ny alika tenany ihany dia manana fizotran'ny fanasitranana voajanahary mahery kokoa noho ny olombelona, ​​ka misy ny fahafaha-manasitrana samirery raha toa ka omena sakafo tsara sy hidiran-drano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Fanafody an-trano ho an'ny aretin'ny urine amin'ny alika
Midika inona ny ranomason'ny alika?
Ahoana no hikarakarana alika kely tsy misy reny